Wararka - Maxay ajaanibtu u isticmaalin tiir marka ay kalluumeysanayaan? Waxay jecel yihiin inay isticmaalaan giraangirta kalluumeysiga!
Maxay ajaanibtu u isticmaalin tiir marka ay kalluumeysanayaan? Waxay jecel yihiin inay isticmaalaan giraangirta kalluumeysiga!
Dalka Shiinaha, weli waxaa jira kalluumeysato badan oo weli adeegsada habka kalluumeysiga caadiga ah ee usha kalluumeysiga, laakiin ma jirto wax usha kalluumeysi ah oo dibadda ah, waxayna doorbidaan inay u isticmaalaan kalluumeysiga kalluumeysiga. Waa maxay sababtu? Waa maxay sababta ay u kala duwan yihiin? Marka xigta, raac KK si aad u sahamiso!
1 area Aagga Kalluumaysiga
Ribbada kalluumeysigu waxay samayn kartaa tuuridda masaafo dheer, iyo kala-soocidda kalluumeysigu aad bay u weyn tahay, qotada kalluumaysiguna waa qoto dheer tahay. Qaybta kalluumaysiga ee tiirka gacanta waa mid aad u yar, taas oo ku habboon kalluumeysiga xeebta, oo qotodheertuna aad u yar tahay.
2 conditions Xaalada deegaanka ee kalluumeysiga
Dabeylaha kalluumeysiga ayaa si caadi ah uga kalluumeysan kara dusha biyaha dabeylo iyo mowjado, wayna adag tahay in la fiiriyo isbeddelka sabeynta marka tiirka gacanta uu ku jiro dabeylo iyo mowjado, taasoo si weyn u saameyneysa saameynta kalluumeysiga.
3 Tirada qalabka
Waxay u muuqataa in usha kalluumaysigu u baahan yahay ul, xariijin, sabayn, jillaab iyo sed. Xaqiiqdii, waxay u baahan tahay waxyaabo kale oo badan. Kuwii ku cayaaray usha kalluumeysiga ayaa si qoto dheer u fahmay.
Way fududahay in la isticmaalo kalluumeysiga kalluumeysiga kalluumeysiga. Ilaa iyo inta aad haysato ul, xarriiq iyo sed, meel walba ayaad ka dhex mushaaxi kartaa.
4, Soo noqnoqoshada isticmaalka sed
Sifooyinka ay giraangiraha kalluumeysiga u adeegsadaan kalluumeysiga guud ahaan waa waaweyn yihiin oo uma baahna in marar badan la beddelo. Haddii bahalka beenta ah la isticmaalo, si isdaba joog ah ayaa loo isticmaali karaa. Sinka loo isticmaalo tiirka gacanta waa mid aad u yar oo u baahan in marar badan lagu daro.
5 process Habka sugitaanka
Kalluumeysatada kalluumeysiga ayaa inta badan go'aamisa haddii ay jirto qaniinyo kalluun by dhawaaqa gambaleelka, iyo habsocodku waa mid dabacsan. Laakiin tiir gacantu waxay u baahan tahay inay mar walba fiiriso sabbaynta, taas oo fudud inay keento daal aragga indhaha.
6 、 Marka laga eego dhinaca Farsamada
Waxaa jira khadado badan oo kalluumeysi oo ku yaal giraanta kalluumeysiga, kuwaas oo ka ciyaari kara saameyn wanaagsan oo sii deynta xoogga ah oo ka dhigta kalluunka mid aan sahlaneyn in la furo
Laynka kalluumaysiga ee tiirka gacanta ayaa go'an Markaad wajahayso kalluunka weyn, waxay inta badan sii daynaysaa xoogga iyada oo loo marayo xirfadaha iyo waxqabadka usha kalluumaysiga, oo leh shuruudo aad u sarreeya xagga farsamada.
7 、 Xagga madadaalada
Marka kalluun weyni uu ku jiro jihada kalluumeysiga, waxaad si buuxda u dareemi kartaa habka dagaalka, kaas oo aad u firfircoon. Markaad kalluunka weyn ku kalluumaysato usha kalluumeysiga, waxay ku xiran tahay xoog xirfad leh, geeddi -socodkuna waa mid dadban.
Waxaa kale oo jirta in doonyaha kalluumeysiga ay si toos ah u raadinayaan kalluun halkii ay ka sugi lahaayeen kalluunka inuu qaniino, laakiin kalluunka usha ayaa ka dadban sugitaanka kalluunka inuu qaniino.
8 、 Marka laga eego dhinaca kalluunka la beegsanayo
Waxaa jira xiriir gaar ah oo u dhexeeya sababta aysan ugu dhowaanin kalluumeysiga usha kalluumeysiga ee dalalka shisheeye iyo kalluunka la beegsanayo. Dalalka shisheeye, badankoodu waa kalluun weyn oo bahalnimo ah, kalluumaysiga doonyaha kalluumaysigana aad baa loo dareemayaa. Intaa waxaa dheer, waddamada shisheeye guud ahaan waxay leeyihiin sharciyo u baahan in kalluunka yaryar la sii daayo marka ay qabtaan.
Bartilmaameedka ugu weyn ee usha waa kalluunka yaryar, kalluumeysiga badan, halkii laga kalluumeysan lahaa "madadaalada"!
Guud ahaan, kalluumeysatada gudaha ayaa caadiyan u qaata kalluumeysiga hab lagu kobciyo dulqaadka iyo kobcinta dareenka, halka kalluumeysatada shisheeye ay xoogga saaraan madadaalada, geeddi -socodkuna waa mid fudud oo toos ah. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo caan ka ah Luya ee Shiinaha, kalluumeysato aad u badan ayaa u weecanaya Luya si ay u kalluumeystaan. Si tartiib -tartiib ah, waxay fiiro gaar ah u siinayaan inta ay qabtaan oo kalluumaysiga u qaataan madadaalo halkii ay kalluumaysan lahaayeen.